Global Voices teny Malagasy » Rosia: Fitaovana Fakàna Horonantsary Miafina Nampiseho Fampielezan-kevitra Tsy Ara-dalàna Tao An-tsekoly. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Desambra 2011 16:15 GMT 1	 · Mpanoratra Alexey Sidorenko Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanabeazana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Vaovao Mafana, Akon'ny RuNet
Ny zava-niseho nateraky ny fakàna sary miafina tao an-tsekoly tany Krasnoyarsk, Siberia dia nanasongadina olana manan-danja any amin'ireo sekoly Rosiana: ireo mpampianatra manohana ny antoko eo amin'ny fitondrana, ny United Russia .
Sady tsy ampy karama no miankina amin'ny fanohanana ara-bola avy amin'ny fitondrana, ny mpampianatra dia anisan'ireo andrin'ny rafitra politika ankehitriny. Ny fifidianana dia matetika atao any amin'ny trano fianarana, ary ny komitim-pifidianana dia mpampianatra no tena mameno azy. Na avy amin'ny tahotra ny ho fahaverezan'ny famatsiam-bola, na avy amin'ny finoana ny toky napetraky ny United Russia, dia miteraka fifidianana tsy ara-dalàna ao an-tsekoly izany matetika.
Mpianatra iray sahy nanohitra ny fahefana.
Ny 15 Novambra 2011 lasa teo, Matvey Tsivinyuk, tovolahy 15 taona, dia namoaka horonantsary tamin'ny Krasnoyarsk Gymnazium number 3  (tsy misokatra intsony io tranokala io taorian'ny fanehoan-kevitra marobe avy amin'ireo bilaogera), nampiseho ny tenany notezeran'ny talen-tsekoly, Alexandra Pronina.
Peta-drindrin'ny United Russia tao amin'ny sekoly Krasnoyarsk. Sary avy amin'i Matvey Tsivinyuk
Tsivinyuk dia tratra nanimba peta-drindrina mikasika politika izay nihantona tao an-dalatsaran'ny sekoly. Ireo peta-drindrina dia nitondra ny loko telon'ny saina rosiana ho lafika ary nisy ny sarin'ny praiministra Vladimir Putin, ny filoha Dmitry Medvedev ary mpanao politika roa hafa avy ao an-toerana (jereo ny sary eo ankavanana).
Talohan'ny nihaonany tamin'ny tale dia nalefan'i Tsivinyuk ny fandraisana sary tao amin'ny findainy. Ny resaka azo tao dia maneho porofo mazava ny hetsika tsy manara-dalàna ataon'ny manam-pahefana ao an-tsekoly, no sady koa manazava ny fomba fanohanana ny antoko eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana.
Tao aoriana kely iny andro iny ihany dia nofafan'i Tsivinyuk tao amin'ny pejiny ilay horonantsary, saingy tsy navelan'ireo bilaogera hanjavona kosa ilay horonantsary :
Ity no fandikàna ny resaka:
Tale: Moa va fantatrao no dikan'izao ho anao?
Tsivinyuk: Tsy midika na inona na inona amiko izao, satria raha araky ny teboka fahadimin'ny andininy fahasivy eo amin'ny lalàn'ny antoko politika dia.. [Matvey dia nanambara ny lalàna  marina izay mandràra ny fijabahan'ny politika eo amin'ny tontolon'ny fampianarana]
Tale: Aoka izay, aoka izay. Tsy misy andininy fahasivy sy fahafolo izany, hanao tatitra an-tsoratra fotsiny ry zareo [ny polisy] fa hoe nosimbainao ilay peta-drindrina. […] Manam-bola be ve ny ray aman-dreninao handoa sazy ho fanamboarana ny simba?
Tsivinyuk: Sazy ho fanamboarana ilay taratasy ve?
Tale [mihiaka]: Ho an'ny asam-boto! Fantatrao fa tsy taratasy fotsiny io, peta-drindrina politika io!
Tsivinyuk: Tsy afaka atao aty am-pianarana io. Satria ny hetsika ataon'ny antoko politika dia voarara aty an-tsekoly.
Tale: Azonao? Tsy fampielezn-kevitra io.
Tsivinyuk: Fa inona io izany?
Tale: Tsy fampielezan-kevitra io. Apetaka eo amin'izay afaka vakian'ny olona ny tantaram-piainana [an'i Medvedev, Putin sy ireo mpanao politika hafa.] Manomboka izao dia raràko tsy hikitika an'ireo peta-drindrina ireo intsony ianao. Efa betsaka izay no nosimbànao. Raha mbola manimba eo ianao dia antsoiko ny polisy.
Tsivinyuk: Dia inona no ho ataony amiko?
Tale: Tsy fantatro. […] Fa efa nampitandrina aho zay. […]
Avy eo dia nampitovy an'i Tsivinyuk tamin'i Lenin ilay tale, ary nampahatsiahy azy ny nahavoaroaka an'i Lenin tamin'ny sekoliny sy ny anjerimanontolo. Avy eo koa dia naneso azy tamin'ny finoana arahan'i Tsivinyuk (kristiana ortodoksa ity farany) koa ilay tale ka nanampy hoe :
Tale: Ahoana no ahafahan'olona kristiana manatanteraka hetsika tsy kristiana tahaka izao? [mikasika ilay fanimbàna peta-drindrina]
Tsivinyuk: Ny fijery ara-politika sy ny fijery ara-pinoana dia tontolo roa samy hafa eo amin'ny fiainana.
Tale [mihiaka]: Raha tsy azonao izany teneniko izany dia ndao hihaona amin'ny mpitondra anareo [mpitondra ny vondrona kristiana ortodoksa misy an'i Tsivinyuk]
Tsivinuyk: Tsy misy idirany ity resaka ity.
Tale [mihiaka]: Ahoana izany? Mino aho fa tsy misy mampianatra anao an'izany aty an-tsekoly aty, tsy misy mampianatra anao hanao zavatra tsy mety toy izao, manoratra zavatra ratsy amin'ny peta-drindrina. Taiza ary iza no nampianatra anao an”izany ary? Taiza izany no niditra tao an-tsainao? Tokony hotadiavintsika ny toerana nianaranao an'izany. […] Averiko ihany, farafahakeliny tokony mandoa sazy ianao.
Tsivinyuk: Ho an'ny inona?
Tale: Mbola tsy azonao ihany ve?
Tsivinyuk: Raha izany dia teneno ahy hoe andininy fahafiry tao amin'ny lalàn'ny sekoly no nodikaiko.
Ilay tale moa dia tsy nanazava tamin'i Tsivinyuk ny antony mazava mety hampisy fanenjehana avy amin'ny manampahefana na ny polisy noho ny fanimbàna peta-drindrina tsy ara-dalàna
Mety tsy ho niparitaka be teny imasom-bahoaka ity raharaha ity raha tsy nisy ny bilaogera tao Moskoa sy ilay mpanao gazety Vladimir Varfolomeev izay namoaka  [ru] ny tantara tamin'ny blaoginy (izay nahateraka fanehoan-kevitramihoatra ny 2000). Naverin'ny tranonkala Siberiana sy ny tao an-toerana navoaka haingana indray ny tantara avy eo.
Ny governora lefitry any Krasnoyarsk, Sergey Ponomarenko, dia nilaza  [ru] fa “tsy mendrika” ny fihetsik’i Tsivinyuk, ary nahasarika fanehoan-kevitra maro avy amin’ireo bilaogera izany ka ireo dia namely fa ny United Russia sy i Ponomarenko mihitsy no “tsy mendrika”.
Ny harivan'io andro io dia nofafàn’i Tsivinyuk ilay horonantsary (tsy nisy vaovao ny mety ho famoretana nihatra taminy). Tamin’ny pejiny Vkontakte (tambajotra socialy mitovy amin’ny Facebook) dia izao no nambarany [ru]:
Tsy nanaiky resy aho, saingy tsy hiditra amin’ny politika intsony. Mino aho fa azonareo ny tiako Iazaina, tsy miditra amin’izany, mibanjina ny ho avy, ny namana no karakaraina.
Maro ny tranga mitovy amin’ity iray ity no efa niseho amin’izao fiandrasana ny fifidianana Rosiana amin’ny Marsa 2012 izao. Ny Kartanarusheniy.ru  [ru], tranonkala dia mitatitra avy eny ifotony ny halatra amin’ny fifidianana, milaza tranga 737 mikasika manam-pahefana miangatra [amin’ireo mpilatsaka hofidiana sasany]. Ary ny taona lasa teo, horonantsary  [ru] iray tao amin’ny YouTube no nampiseho mpampianatra manolotra fanomezana an’ireo mpianatra nahazo mari-pahaizana sady miresaka momba ny fahatsaran’ny United Russia.
Ny resaka nataon’ilay talen-tsekoly sorena mafy sy ilay mpianatra tony mahay lalàna dia maneho elanelana be misy eo amin’ny sokajin-taona, sy fanantenana fa ny haizina sy ny tsy fahalalàna (raha raisina hoe avy amin’ny sekoly no ahazoana ny fahalalàna rehetra) dia azo abaribary sy resena.
Fanampim-baovao: Vladimir Varfolomeev dia nilaza fa voaantso tany amin’ny polisy ny renin’i Tsivinyuk. Ny polisy dia tsy nanome fanazavana momba ny antony niantsoana azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/12/03/25771/
 Krasnoyarsk Gymnazium number 3: http://gimn3.ru
 dia nilaza: http://www.ridus.ru/news/9805/